Nzuzo nke ịkụ ihe na ilekọta sọrel n'oge okpomọkụ ha - Akuku sọrel - 2020
Atụmatụ nke na-eto eto sọrel n'ọhịa
A na-ejikarị srel na-esi nri mgbe a na-akwadebe efere dị iche iche, sauces na canning. Sorrel - osisi na-eguzogide ọgwụ, nke na-egosi na akwa otu nke mbụ. O nwere otutu vitamin na mineral, yana acids di iche iche, nke uto ya na-enye obi uto.
Esi esi choputa ebe akuku sọrel
Nkwadebe ala maka ịgha mkpụrụ
Esi kwadebe osisi sọrel tupu ị kụọ
Na-elekọta sọrel na saịtị gị
Mgbe atọ atọ
Weeding na loosening ala
Ngwurugwu Sorrel na fatịlaịza
Atụmatụ na ụbịa
Otú e si emeso ọrịa na pests nke sọrel
Akuku na ezigbo ọnọdụ nke na-eto eto sọrel
Sorrel nwere ike itolite n'otu ebe ruo ihe dị ka afọ anọ, ma maka nke a ọ chọrọ ọnọdụ kwesịrị ekwesị.
Ị ma? Mmiri ọgwụ ọjọọ nwere ike ibu ihe ruru ọkara mita n'ime ala.
Ịbawanye sọrel n'elu ala bụ ihe dị mfe. Nke mbụ, ịkwesịrị ịhọrọ ebe ebe osisi ahụ ga-adị mma, n'ihi na Iji nweta nnukwu owuwe ihe ubi, ịkwesịrị ịkụ sọrel n'ite ala mmiri, ọ bụ ezie na mmiri ekwesịghị ịdị na-agbanye ala. E kwesịrị ikpochapu ala dị iche iche (karịsịa ebe obibi na-adịghị mma na ọka wit). Ala kacha mma maka osisi a bụ loam ma ọ bụ ájá ájá, nke ọma gbasiri ike na humus. Tụkwasị na nke a, a pụrụ ikpokọta ezigbo owuwe ihe ubi site na peaty na-ekpocha ala.
Ọ dị mkpa! Mmiri mmiri kwesịrị ịdị omimi nke na-erughị 1 mita site n'elu.
Ka ikuku sọrel wee bụrụ ọgaranya, ọ dị mkpa iji dozie ala tupu oge eruo. Mgbe o kpebiri na saịtị dị n'okpuru sọrel, na ọdịda, jiri mmiri wetụ ya, potassium na phosphate (6: 1: 1). Ụdị ndị a dị maka 1m ².
N'oge opupu ihe ubi, mgbe ị na-eme ka sọrel sọọpụ, mee ka ala na ngwakọta nke ammonium nitrate na potassium nnu (2 g ọ bụla), superphosphate na urea (4 na 40 g), gbakwunye na 3 n'arọ nke humus, gbakwunye nke ọma na ifatilaiza ala (kwa 1m²) .
Mkpụrụ osisi Sorrel dịkwa mma ịkwadebe n'ọdịnihu. Ka ha wee bilie nke ọma, ha ga-etinye ya na mmiri, kechie na gauze wee hapụ maka ụbọchị 2. Mkpụrụ ga-ekpuchi mmiri niile, ekele nke gavel na-eme ngwa ngwa. Ịnwere ike ịgbakwunye nri nri dị iche iche na mmiri, mgbe ahụ, osisi ahụ ga-esiwanye ike na ihe na-eguzogide ọgwụ na mpụga. Ime ihe dị mfe na mkpụrụ nke sọrel, ị ga-enweta 100% germination.
Ọ bụrụ na ị na-eme ọsọ ọsọ ma ị nweghị oge ịkwadebe osisi n'ụzọ kwesịrị ekwesị, mgbe ahụ Ghaa ha dika ha di. Sorrel ka na-arịgo, ma ọ bụghị ogologo ma dị ike.
Mgbe osisi ahụ kwadebere, ị nwere ike ịgha mkpụrụ sọrel (n'enweghị ihe ọ bụla). Osisi kwesiri ka acho ya na ala di njikere maka agha ihe omimi nke ihe di ka sentimita 2 na nke di anya nke centimita. A na-atụ aro ka ị gbasoo ebe dị sentimita 15 n'ogologo. Ná ngwụcha nke ọrụ ahụ na saịtị ahụ na-acha na peat. Ọ bụ ihe na-achọsi ike ikpuchi ala na ihe nkiri, ebe ọ bụ na nrụpụta griinụ ga-enyere osisi aka ịrị elu ngwa ngwa ma ị ga-enwe ike ịhụ akpa ndị ome dịka oge 5-7 ruo ụbọchị ịgha mkpụrụ.
Ị ma? Ọ bụrụ na ịnweghị ekpuchi ebe ahụ, ọ ga-ewe ihe dị ka izu abụọ ka mkpụrụ ahụ wee bilie..
Mgbe ahịrị nke mbụ greenrel sọrel ga-thinned pụọ. Ebe dị anya n'etiti ọdịda dị n'ọdịnihu kwesịrị ịbụ ma ọ dịkarịa ala centimeters. Akuku mmiri na-enye gị ohere ịchịkọta elu na otu afọ ahụ, ma, ị nwere ike ime ka sọlfọ mwute n'oge okpomọkụ na mgbụsị akwụkwọ. Ọ bụrụ na ị na-eme nke a na oge okpomọkụ, a ga-eme ka ọ sie ike, ọ ga-esikwa na mmalite oge opupu ihe ubi. Ọ bụrụ na ị kpebie kụrụ sọrel na ọdịda, i nwere ike iwechaa obere oge. A ghaghị ime sọrel ke ọdịda n'ụzọ dị ka mkpụrụ osisi ahụ enweghị oge iji too ma ghara ifunahụ oyi n'oge oyi.
Sorrel chọrọ obere nlekọta, nke ga-enye ya ohere ịzụlite na-ejikarị. Karịsịa, mgbe ịgha mkpụrụ dị mkpa:
wepu ala ma wepu ahihia site na ala n'etiti ahịrị (n'ihi na ahihia ndi ozo, charel agaghi enwe ike itolite).
na-eri nri osisi mgbe nile.
otu ọnwa na ọkara n'ihu ala na-efu, a ghaghị ịkpụ sọrel ahụ. Ọ bụrụ na emeghị nke a, epupụta ga-adaba ma daa n'ala, si otú a gbochi ohere ịnweta ikuku oxygen na usoro mgbọrọgwụ.
Na mgbụsị akwụkwọ, ịkwesiri ifuru mmiri na ahịrị.
Ọ bụ ezie na a na-ewere sọrel dị ka ahịhịa na-eguzogide ọgwụ na ntu oyi na-eguzogide, ọ na-amasịkarị ịgbara mmiri. N'ụbọchị mgbe ikuku ikuku dị elu karịa 26 Celsius C, osisi ahụ na-amalite nke ọma na nke nta nke nta. Dị ka ọ dị, nke a na-ebelata àgwà nke ihe ubi ahụ. Nke a emeghị - sọrel ga-abụ mmiri mgbe nile. N'oge akọrọ, a na-agba ya mmiri kpamkpam, ma ọ ghaghị ịhụ na mmiri ahụ adịghị edozi. Ala akọrọ na-amị mkpụrụ na-eduga na ejection nke stalks. Mkpa mmiri mmiri sọ oyi na oyi na-apụ n'anya ya.
Otu akụkụ dị mkpa nke nlekọta ihe ọkụkụ na-adọpụta ma na-ewepụ ala. Iji belata ọrụ dị otú ahụ, mee ya iwu mgbe ọ bụla nke ọ bụla na-agbanye ala gburugburu sọrel, ọ ga-egbochi mgbasa nke ata. N'oge opupu ihe ubi ọ dị mkpa ịtọghe ala n'etiti ahịrị. N'otu oge ahụ, na-etinye mmiri ọgwụ na chalịl na ngwakọta nke humus na uyi, ọ ga-eme ka ịzụlite ọganihu nke akwụkwọ ọhụrụ.
Ịkwanye na fertilizing dị ezigbo mkpa maka ndụ nke osisi a kọwara. N'ịmara otú ị ga-esi na-edozi sọrel maka ibu, ị ga-enye onwe gị oke owuwe ihe ubi. Ya mere nri akuku mineral na superphosphate, potassium chloride na urea dị mma dị ka ogige bara uru. Ọzọkwa, nri fatịlaịza ga-aba uru, nke ga-eme ka ị ga-eme ka okpukpu ahụ dịkwuo elu.
Ọ dị mkpa! Mgbe ị na-ahọrọ fatịlaịza ịkwụsị ọnọdụ ihu igwe. Dịka ọmụmaatụ, n'oge mmiri ozuzo, ọ ga-aka mma iji uwe mposi, ma ọ bụrụ na ihu igwe na-akọrọ, mgbe ahụ kwado osisi ahụ nke nwere mmiri mmiri..
Ọ ka mma mulch sọrel na peat, humus ma ọ bụ dara epupụta. Inye nri sọrel na mmiri ga-enyere ya aka inweta micronutrients ma nwekwuo uto. A ga-etinye Mulch n'ime wara wara, nke mere na nri na-eru mgbọrọgwụ n'emeghị ka osisi ahụ ghara iku ume.
Sorrel jupụtara na ọnwa 2 site n'oge ịgha mkpụrụ, ya bụ, ọ bụrụ na ị kụrụ sọrel na oge opupu ihe ubi, ị nwere ike iwe ihe ubi n'oge mbido. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị kụrụ ya na mbụ, dịka ọmụmaatụ, n'oge ọdịda, ọ ga-eto ngwa ngwa mgbe snow ahụ gbazere.
A na-ebipụ ma ọ bụ dọkaa akwa slrel, ma rịba ama na nkezi ka mma ịhapụ: ha adighi oke dika ndi agbataobi ha ma site n'aka ha o ga - enwe ike ibute ihe ubi ohuru. Oge kacha mma iji kpokọta osisi bụ n'isi ụtụtụ, n'ihi na n'oge a, epupụta ndị kachasị mma.
Tupu ịmalite ilekọta sọrel n'oge mgbụsị akwụkwọ, ị ga-ehichapụ ya kpam kpam site na epupụta, onye nwere ike ịnọ na njedebe ikpeazụ. Mgbe ahụ i nwere ike ịmalite ịkụzi osisi ahụ. A na-eme nke a site na enyemaka nke humus, compost (2 bọket ga-ezuru otu square square), ma ọ bụ jiri ngwọta nke mullein. N'ọnọdụ ikpe a, a ghaghị diluted ya na mmiri na 1: 7.
Ọ bụ ezie na epupụta nke sọrel bụ nnọọ acidic, ha ka na-ebibi pests. Dịka ọmụmaatụ, mgbe ị chọpụtara na osisi ahụ, oghere nke agba nke akwụkwọ, ịkwụsị ịkụ na ịcha, ị nwere ike ịmalite iche echiche banyere ọdịdị nke nje. Njide ọgwụ na-edozi ahụ bụ ọgwụ nlekọta nke oge akwa, mbibi nke ata, osisi Ome na ala mulching.
Ị nwere ike ịbanye na ọrụ nke ngwá ọrụ nke oge a maka nlekọta nke osisi. Obi abụọ adịghị ya, ha ga-enyere aka ngwa ngwa tufuo pests, ma na-ebutekwa ihe uto nke sọrel. Ya mere, a na-atụ aro ịhazi osisi ahụ n'oge mgbụsị akwụkwọ, ọ bụghị n'oge owuwe ihe ubi.
Isi onye iro nke sọrel bụ sọrel akwukwo ebe. Dị ka aha ahụ pụtara, nje a na-eri akwụkwọ osisi ahụ. Ọ bụrụ na ụdị nsị ahụ na-apụta n'elu ihe ndina ahụ, ha na-amalite ịbawanye ụba na-arụsi ọrụ ike, na-etinye ihe ndị dị n'ime ala. Ruo izu ole na ole, ndị okenye na ndị tozuru etozu na-eri akwụkwọ na ihe niile na-ekwu. Ya mere olee otu ị si edozi sọrel si oghere? Maka nzube ndị a, ọ kachasị mma iji usoro ndị mmadụ. Ghaa osisi ahụ na ntu, ihe ngwọta nke garlic na ncha ma ọ bụ ụtaba siga.
Ọfọn, ugbu a, ị maara banyere kere sọrel ma ị nwere ike ikpebiri onwe gị, nke ọnwa ọ ka mma ịgha sọrel na otu esi elekọta ya.